Fahasalamana: addiction | Valin'ny Fanamarinana
Home fahasalamana fiankinan-doha
Ny fampiasana an-tery na dia eo aza ny voka-dratsy dia ny mampiavaka ny fiankinan-doha. Midika izany fa na ny fiankinan-doha aza dia miteraka fahaverezan'ny asa, fifandraisana efa simba, korontana ara-bola, fahatsapana fahakiviana ary tsy voafehy, dia mbola ataontsika loha laharana hatrany ny fitondran-tena mampihetsi-po na ny zava-mahadomelina mihoatra ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainantsika.
Ny famaritana fohy momba ny fiankinan-doha nomen'ny American Society of Addiction Medicine dia:
Ny fiankinan-doha dia voalohany, aretina mitaiza ny valin'ny atidoha, ny antony manosika, ny fitadidiana ary ny rafitra mifandraika amin'izany. Ny tsy fahombiazana eo amin'ireo sehatra ireo dia mitarika amin'ny fisehoan-javatra biolojika, psycholojika, sosialy ary ara-panahy. Izany dia hita taratra amin'ny olona iray mikatsaka ny valisoa sy / na fanamaivanana amin'ny alalan'ny fampiasana vatana sy ny fitondrantena hafa.
Ny fiankinan-doha dia manavaka ny tsy fahafahana mifehy tsy tapaka, ny fihenan'ny fitondran-tena, ny faniriana, ny fanekena ny olana manan-danja amin'ny fitondrantenan'ny tsirairay sy ny fifandraisana aman'olona, ​​ary ny valin-teny mampihetsi-po. Tahaka ny aretina mitaiza hafa, ny fiankinan-doha dia matetika mahakasika ny famerenana sy ny famerenana indray. Raha tsy misy fitsaboana na fanolokoloana amin'ny asa fanarenana, dia mandroso ny fiankinan-doha ary mety hiteraka fahasembanana na fahafatesana aloha.
Ny fikambanana Amerikanina momba ny fitsaboana ny fiankinan-doha ihany koa dia mamaritra ny famaritana lava. Izany dia miresaka momba ny fiankinan-doha amin'ny antsipiriany sy azo jerena Eto. Naverina naverina farany tao amin'ny 2011 ilay famaritana.
Ny fiankinan-doha dia vokatry ny fizotry ny fanovana ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha. Ny rafitra valisoa ao amin'ny atidohantsika dia nivoatra mba hanampy antsika ho tafavoaka velona amin'ny alàlan'ny fanaovana antsika hitady valisoa na fahafinaretana, hisoroka ny fanaintainana ary isika rehetra miaraka amin'ny ezaka kely indrindra na fandaniana angovo. Tianay ny zava-baovao, indrindra raha afaka miaina fahafinaretana isika na misoroka fanaintainana amin'ny ezaka tsy dia misy loatra. Ny sakafo, ny rano, ny fatorana ary ny firaisana ara-nofo no valisoa lehibe indrindra novolavolaintsika hikatsahana fiainana. Ny fifantohana amin'izy ireo dia nivoatra rehefa tsy dia nilaina ireo zavatra nilaina ireo, noho izany dia miaina fahafinaretana isika rehefa mahita azy ireo. Ireo fitondran-tena velona ireo dia tarihin'ny dopamine neurochemical, izay manamafy ny lalan'ny neural izay manampy antsika hianatra sy hamerina ireo fihetsika. Rehefa ambany ny dopamine dia manentana antsika handrisika antsika hikaroka azy ireo isika. Raha ny faniriana hikatsaka ny valisoa dia avy amin'ny dopamine, ny fahatsapana fahafinaretana na euforia amin'ny fahazoana ny valiny dia avy amin'ny vokatry ny neurochemical opioids voajanahary ao amin'ny ati-doha.
Androany amin'ny tontolontsika be dia be, voahodidin'ny kinova voajanahary 'supernormal' isika toy ny sakafo tsy misy fatrany calorie ary sary vetaveta amin'ny Internet. Ireo dia manintona ny fitiavan'ny ati-doha ny zava-baovao ary ny faniriana fahafinaretana amin'ny ezaka kely. Rehefa mihinana bebe kokoa isika dia miakatra ny tokonam-bitsika ary mahatsapa fandeferana isika na tsy fananana fanentanana avy amin'ny haavon'ny fihinanana taloha. Io indray dia miteraka ny filantsika fanamafisana bebe kokoa mba hahatsapantsika fahafaham-po, na dia vetivety ihany aza. Miova ho takiana ny faniriana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manomboka 'mila' ny fihetsika mihoatra ny 'fitiavantsika' azy isika satria ny fanovana ati-doha mifandraika amin'ny fiankinan-doha dia mifehy ny fitondran-tenantsika ary very ny safidintsika malalaka.
Ny valisoa hafa voadinika tsara, tsy dia 'voajanahary' toy ny siramamy, alikaola, nikôtinina, kôkainina, heroine dia mampiasa ny rafitra valisoa ihany koa. Nosamborin'izy ireo ny lalan'ny dopamine natao ho an'ny valisoa voajanahary. Miankina amin'ny fatra, ireo valisoa ireo dia mety hiteraka fahatsapana fahafinaretana mahery vaika na euforia noho izay niainana tamin'ny valisoa voajanahary. Ity fanindrahindrana tafahoatra ity dia mety hanary ny rafitry ny valisoa ho tsy mahay mandanjalanja. Ny ati-doha dia hifikitra amin'izay zavatra na fitondran-tena manampy amin'ny fanalefahana ny fihenjanana. Ny atidohantsika dia tsy nivoatra hiatrehana io enta-mavesatra tsy mitsaha-mitombo io ao amin'ny rafitra sensory.
Ny fiovana lehibe indrindra amin'ny atidoha dia mitranga eo amin'ny dingan'ny fiankinan-doha.
Voalohany dia lasa 'tsy misy dikany' amin'ny fahafinaretana mahazatra isika. Mahatsiaro tsy misy dikany izahay amin'ny fahafinaretana andavanandro izay nahafaly anay.
Ny voka-dratsy na fitondran-tena mampiankin-doha dia miasa amin'ny fanovana lehibe faharoa, 'sensitization'. Midika izany fa tsy mankafy fahafinaretana avy amin'ny loharano maro isika fa lasa mifantoka amin'ny tanjon'ny faniriantsika na zavatra mampatsiahy antsika izany. Mino izahay fa amin'ny alalany no hahatsapantsika fahafaham-po sy fahafinaretana. Manangana fandeferana izahay, zatra ny fanabeazana avo lenta kokoa izay manamaivana ny tsy fahazoana aina miala amin'ny azy.
Ny fiovana fahatelo dia ny 'hypofrontality' na ny fahasimbana ary ny fihenan'ny fiasan'ny lobus frontal izay manampy amin'ny fanakanana ny fihetsika ary mamela antsika hahatsapa fangorahana ny hafa. Ny valin'ny frontal dia ny freins izay mitazona fihetsika tokony hofehezintsika. Io dia ampahany amin'ny atidoha ahafahantsika mametraka ny tenantsika ho eo amin'ny kiraron'ny hafa hiaina ny fomba fijerin'izy ireo. Manampy antsika hiara-miasa sy hifamatotra amin'ny hafa izany.
Ny fiovana fahefatra dia ny famoronana ny rafi-pandrefesana tsy manjary. Izany dia mamela antsika ho ambony noho ny fihenjanana ary mora simbaina, mitarika amin'ny fitondrantena mandefitra sy mampihetsi-po. Izany no mifanohitra amin'ny herim-piainana sy ny tanjaka ara-tsaina.
Ny fiankinan-doha dia vokatry ny fampiasana zava-mahadomelina (alikaola, nikôtinina, heroine, cocaine, skunk sns) na fitondran-tena (filokana, pôrnôgrafia amin'ny Internet, filalaovana, fiantsenana, fihinanana sakafo junk) izay miteraka fiovana eo amin'ny rafitry ny ati-doha sy ny fiasa. . Tsy mitovy ny atidohan'ny tsirairay, ny olona sasany mila fanentanana bebe kokoa noho ny hafa mba hiaina fahafinaretana na ho lasa andevozin'ny fiankinan-doha. Ny fifantohana tsy tapaka sy ny famerimberenana zavatra iray na fitondran-tena manokana dia manondro ny ati-doha fa nanjary zava-dehibe amin'ny fivelomana io asa io, na dia tsy izany aza. Ny atidoha dia manitsy ny tenany hametraka an'io zavatra na fitondran-tena io ho lohalaharana ary manambany ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainan'ny mpampiasa. Mampihena ny fomba fijerin'ny olona iray izany ary mampihena ny kalitaon'ny fiainany. Izy io dia azo jerena ho toy ny endrika 'mianatra be loatra' rehefa miraikitra ao anaty valin'ny fanehoan-kevitra miverimberina ny ati-doha. Mamaly ho azy isika, tsy misy ezaka tsy ampoizina, amin'ny zavatra manodidina antsika. Izany no antony ilantsika lobe manoloana tena mahasalama hanampy antsika hieritreritra tsara momba ny fanapahan-kevitsika ary hamaly amin'ny fomba izay hampiroborobo ny tombontsoantsika lavitra fa tsy ny fanentanana vetivety fotsiny.
Raha ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, ny fahitana ny solosaina finday, tablette na smartphone dia mibitsibitsika fotsiny ho an'ny mpampiasa fa ny fahafinaretana dia 'eo an-jorony'. Ny fiandrasana valisoa na fanamaivanana amin'ny fanaintainana no mitarika ny fihetsika. Ny fiakarana amin'ireo tranokala izay hitan'ny olona iray taloha fa "maharikoriko na tsy mifanaraka amin'ny tsirony ara-nofo" dia mahazatra sy iainan'ny antsasaky ny mpampiasa. Ny fiankinan-doha tanteraka amin'ny fahatsapana ara-pahasalamana dia tsy ilaina hiteraka fiovan'ny ati-doha izay miteraka vokatra ara-tsaina sy ara-batana manahirana toy ny zavona amin'ny ati-doha, fahaketrahana, fitokanana ara-tsosialy, fiakarana, fanahiana ara-tsosialy, fahasahiranana eo amin'ny erectile, tsy fiheverana loatra ny asa sy ny tsy fisian'ny fangorahana. ho an'ny hafa.
Ny fisamboarana ny dopamine izay mamokatra dia mety ho mendri-piderana amin'ny fanovana ny atidohan'io atidoha io ho toy ny zava-dehibe na miavaka amin'ny fivelomany. Ny fiovan'ny atidoha dia mivadika amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fitondran-tenantsika. Ny vaovao ratsy dia ny fampivelarana ny fiankinan-doha iray mora mora amin'ny fiankinan-doha amin'ny zavatra hafa na fitondrantena hafa. Mitranga izany rehefa miezaka ny mijanona mialoha ny fialana amin'ny soritr'aretina ny atidoha amin'ny fikatsahana fahafinaretana mahafinaritra, na ny dopamine sy ny opioid, avy any an-kafa. Ny tanora dia mora vidy kokoa amin'ny fiankinan-doha.
Ny vaovao tsara dia noho ny plastika ao amin'ny atidoha, afaka mianatra miala amin'ny fampivoarana ny fitondran-tena mampidi-doza isika amin'ny fanombohana vaovao ary mamela ny fahazarana taloha. Mampihena ny lalan'ny ati-doha taloha izany ary manampy amin'ny famolavolana vaovao. Tsy mora ny manao izany fa miaraka amin'ny fanohanana, azo atao izany. Lehilahy sy vehivavy an'arivony no tafarina tamin'ny fiankinan-doha ary nankafy fahalalahana sy fanolorana fiainana vaovao.
<< Famporisihana mahery vaika Fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena >>